SHEPADOODLE EYGA MACLUUMAADKA IYO SAWIRADA - EEYAHA
Shepadoodle Eyga Macluumaadka iyo Sawirada
Adhijistaha Jarmalka / eeyaha Poodle eeyaha isku dhafan
Beau eeyaha Shepadoodle ee jira 7 bilood jir— Wuxuu ka yimid a qashin 9 cunug caafimaad qaba . Aabihiis wuxuu ahaa Adhijir Jarmal oo jilicsan hooyadiisna waxay ahayd madow Poodle madow. Mid ka mid ah tayadiisii ​​ugu fiicneyd ee aan isku daynay inaan gaarno waa jaakadiisa aan daadin. ' Lahaanshaha sawirka My-Shepadoodles
Shepadoodle maaha eey saafi ah. Waa iskutallaab udhaxeysa Adhijirka Jarmalka iyo Poodle ( Heerka , Kaabayaasha ama Ciyaaraha ). Habka ugu wanaagsan ee lagu go'aaminayo dabeecadda nooc isku dhafan ayaa ah inaad ka raadiso dhammaan noocyada iskutallaabta isla markaana aad ogaato inaad ka heli karto isku-darka mid kasta oo ka mid ah astaamaha laga helo nooc kasta. Maahan in eeyeyaashan eyda isku dhafan ee la dhalayey yihiin 50% nadiif ah ilaa 50% saafi ah. Aad bay caan u tahay in kuwa wax soosaara ay tarmaan iskutallaab badan .
'Tani waa Bailey. Wuxuu kudhowaad yahay 11 bilood. Aabihiis wuxuu ahaa Adhijirka Jarmalka hooyadiisna waxay ahayd a Poodle-ka caadiga ah . Miisaankiisu waa 76 rodol. Bailey waa eey naxariis badan oo jecel. Wuu i ag joogaa markaan ag joogo oo meel walba wuu iga raacaa. Wuu jecel yahay eeyo kale iyo caruurta . Wuxuu aad uga xishoodaa la kulanka dadka cusub laakiin markii uu go'aansado wuxuu jecel yahay qofka ay u noqdaan sida saaxiibbadiis sida reerkaygu ugu yeero. Qof walba wuu jecel yahay la kulankiisa! Wuxuu ahaa 10-toddobaad-jir wuxuu ahaa mid aad u deg deg badan inuu wax barto fadhiiso, gariir oo hoos u dhig . Eraygiisa xusuusinta ah waxay ahayd aan tagno oo waqti dheer kuma qaadan inuu ogaado amarradiisa. Tababarka guriga hawo ayaa la jirtay. Isku soo wada duuboo waxaan dhihi lahaa waa eey layaableh oo cod leh waana inuu caqli galiyaa wanaagiisa! Bailey waa kubad weyn oo kubbadda cagta ah waan ku qoslaa maalin kasta! '
Bailey the Shepadoodle qiyaastii 11 bilood jir
eyga lo'da Australia iyo isku darka sheybaarka
Kyser the Adhijirka Jarmalka iyo Poodle-ka caadiga ah isku darka 1 1/2 sano jir— 'Kyser waa wiil nasiib badan-nasiib badan. Wuxuu jecel yahay dadka oo dhan iyo eeyo kale . Aad u adeec badan, wuxuu ku fiican yahay nooc kasta oo tababar ah. Waxaan ka heli isaga qurxinta la sameeyo 3dii toddobaadba mar. Kyser wuxuu kufaraxsanahay inuu ku yeesho qoyskeena, xitaa marka uu kujiro 'daqiiqad kyser bratty' qof walba wali wuxuu jecelyahay shaqsiyaddiisa wanaagsan iyo dabeecad macaan. '
Rudy Shepadoodle markay ahayd 9 bilood
'Tani waa Magellan, 50% Adhijirka Cad , konton% Poodle Casaan Cas (kareem iyo Shepadoodle casaan ah) qiyaastii hal sano jir. Milkiilayaashiisu waxay ugu yeeraan ... 'dhalaalaya' !! '
Beau eeyaha Shepadoodle ee jira 7 bilood
xadka Terrier Jack russell mix
Beau Shepadoodle ahaan eey yar oo jira 4 bilood
Beau eeyaha Shepadoodle ee jira 4 bilood, sawir xushmad leh My-Shepadoodles
Ellie Shepadoodle oo 1 sano jir ah (Shepherd German / Standard Poodle hybrid) - 'Waxaan u mahadcelinayaa Shannon oo ka tirsan Shannon's Shamrock Kennels oo noo ogolaaday inaan qaadanno eeygan cajiibka ah waxay sii ahaan doontaa sharafteenna iyo farxadeenna!'
sarkaal oo dahab ah iyo isku dhafka bulldog
Ellie the Shepadoodle at 1 sano jir (Shepherd German / Standard Poodle mix mix dog)
Ellie Shepadoodle 11 bilood jir ah (Shepherd German / Standard Poodle mix mix dog)
Ellie the Shepadoodle at 5 bilood jir— Iyadu waa eey cajiib ah, dabeecad deggan oo caqli badan. Waxaan iyada la joognay muddo bil ka badan hadda, mana ku farxi karin iyada iyada oo ku habboon qoyskeenna oo ka kooban laba carruur ah iyo laba eey oo kale.
Ellie the Shepadoodle oo ah cunug yar oo 4-bilood jir ah oo ay ku ciyaaraan tooydeeda
qasab spaniel iyo corgi qas
Ellie Shepadoodle oo ah cunug yar oo 4 bilood jir ah
Qashin yar oo yaryar oo Shepadoodle ah
Eeg tusaalooyin dheeraad ah oo ku saabsan Shepadoodle
Sawirada Shepadoodle 1
Shepadoodle Sawirada 2
Shepadoodle Sawirada 3
Liistada Eyda Cunnada Isku-dhafka ah ee Caanoodka ah
Liistada eeyaha reer Jarmal ee loo yaqaan 'Shepherd Mix Breed Dogs'
Liiska eeyaha Poodle Mix Taranka
Macluumaadka Taranka Eeyaha Boxita iyo Sawirada
Macluumaadka iyo Sawirada Taranka Talyaaniga Greyhuahua Dog
Yorkshire Terrier Dog Sawirada Taranka, Yorkie, Bogga 1
Macluumaadka iyo Sawirrada Taranka Bull Dog Shorty
Macluumaadka Yar ee Labradoodle Eyga Macluumaadka iyo Sawirada
Macluumaadka iyo Sawirada Taranka Bulldog Dog
Macluumaadka iyo Sawirada Taranka Bull Dog ee Pakistan
Macluumaadka Taranka Eeyaha Scorkie iyo Sawiro
Jack Tzu Macluumaadka iyo Sawirada
kalabar pitbull badh shar pei
Jack russell terrier iyo iskudhafka corgi
iskeelka cocker iyo poodle qasan
adhijirka Jarmalka iyo feeryahan isku jira
mini dachshund isku darka pinscher mini
sawirrada eeyaha digaagga
1 sano jir ingiriis mastiff